အင်္ဂလိပ်စကားပြောစတင်လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ..???? - Myanmar Network
Posted by Myo Myint Kyaw on December 29, 2011 at 19:56 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စကားပြောစတင်လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာကို ကျနော်လေ့လာခဲ့ အတိုင်း ပြောပြချင်တာပါ….
Dictionary က သေးသေးလေးရယ် သိပ်စုံမှာလည်းမဟုတ်ဘူး…..အကြီးဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ စိတ်ကူး မိသလား???
စာအုပ်ကြီးမှ စကားလုံးက စုံတာတို့… Update ဖြစ်တာတို့ကအရေးမကြီးပါဘူး ….
Pocket Dictionary (အိပ်ဆောင်အဘိဓါန်)လောက်ဆို စတင်လေ့လာဖို့လုံလောက်ပါပြီ…)
ဒါပေမဲ့ ….. အိပ်ဆောင် အဘိဓါန်ကို (၃)အုပ် ထားစေချင်ပါတယ်…ဘာတွေလဲဆိုတော့ …
(၁) မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် (အိပ်ဆောင်အဘိဓါန်) …
မိခင်ဘာသာစကားကနေ Second Language ကို စတင်လေ့လာရာမှာအများအားဖြင့် မြန်မာလိုပဲတွေးပြီးမှ စကားလုံးရှာရမှာကို)…ဒါကြောင့် မြန်မာအင်္ဂလိပ်အိပ်ဆောင်အဘိဓါန်ကို သွားလေရာဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်။
(၂) အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ (အိပ်ဆောင်အဘိဓါန်)…..
အင်္ဂလိပ်တော့ စကားလုံးသိပါပြီတဲ့ဗျာ မြန်မာလိုမသိသေးရင် ရှာလို့လွယ်အောင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ကိုဆောင်ထားစေချင်ပါသေးတယ်။
(၃) အင်္ဂလိပ်- အင်္ဂလိပ် (အိပ်ဆောင်အဘိဓါန်)….
ဒါကတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးရလာရင် အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားလဲ.. ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲ …ဆိုတာကို အင်္ဂလိပ်လို စဉ်းစားတတ်လာအောင်နဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို ၀ါကျလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြရှင်းပြထားတဲ့စာအုပ်မျိုးကို ဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်
ကျနော်ကတော့ Long Man (Pocket Dictionary) ကိုညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်………
ဒါဆိုဘယ်နေရာသွားသွား/ ရောက်ရောက် ကိုယ်မသိတဲ့စကားလုံးတွေကို သိလာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်…..
ဈေးနှုန်းချိုသာ တဲ့ Audio Player တွေဖြစ်တဲ့ Mp3, MP4. JXD တို့မျိုးကို မိမိမှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ ၀ယ်ထားစေချင်ပါတယ်….. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Listening(နားထောင်စွမ်းရည်) ပိုင်းကို လေ့ကျင့်ဖို့ပါ…
အိမ်မှာတော့ DVD Player /EVD Player တို့ကရှိပါရဲ့….မိသားစုနဲ့ဆိုတော့. လေ့လာရာမှာ အဆင်မပြေ လောက်ဘူးလို့ထင်လို့ပါ…. ကိုယ်ပိုင် Mp3 လေးရှိထားတော့ ဘယ်နေရာသွားသွား နားကျပ်လေးနဲ့ နားထောင်လိုက်တော့ ဘယ်သူမှအနှောင့်အယှက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့……..
အဲ့ဒီမှာ မိမိလေ့လာမယ့် ဘာသာစကားရဲ့ စကားပြောအခွေ၊ (သို့) Short Stories (သို့) English Song တွေကို ထည့်သွင်းထားပါ………. အခွေဆိုရင်လည်း အခွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်နဲ့တွဲပြီးလေ့လာပါ…….. သီချင်းဆိုရင်လည်း သီချင်းရဲ့ Lyrics တွေကို အွန်လိုင်းမှာ ဒေါင်းလော့ဆွဲလို့ရပါတယ်… Short stories, တွေဆိုလည်း အွန်လိုင်းမှာ Mp3 နဲ့အတူဒေါင်းလော့ဆွဲပြိး ရယူနိုင်ပါတယ်…………..
ကလေးတွေစကားမပြောတတ်ခင်က မိခင်၊ဖခင်တို့ရဲ့အသံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောလာတဲ့အသံကို အရင်ကြားရ ပါမယ်…ဒါကိုကလေးက မှတ်သားလာပါတယ်. နည်းနည်းကြီးလာတော့ မိခင်က တစ်ခွန်းစ၊ နှစ်ခွန်းစ ပြောပြ လာတော့ ကလေးက လိုက်ပြီးအသံထွက်ပါတယ်။။။.ဒါနဲ့ပဲ နားရည်ဝလာပြိး ပြောတတ်လာပါတယ်…
(၄) Writing လို့ပြောရမလားပဲ ……….ကျနော်တို့က စပြိး နားထောင်မယ်… နောက်တော့ ပြောကြည့်မယ်.. ဆက်ပြီးတော့ ဖတ်မှတ်ပြီးမှ ရေးကြမလားလို့တောင်ပြောရပါမယ်.
ပြိးတော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော စတင်လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် အလွယ်ဆုံးက စလေ့လာပါ… အခက်ကြီးတွေ မတွေးပါနဲ့…မိမိနဲ့ မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အဆောင်အရောင်ပစ္စည်းတွေကအစ လေ့လာမှတ်သားပါ…
ကလေးတစ်ယောက်လို စပ်စုပါ…. အမေးအမြန်းထူပါ….. ပြီးမှ ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာကို အဖြေရှာပါ..
ကျနေ်ာအပြင်မှာခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပါတယ်… သူက ရုရှား စကားပြောနိုင်တယ်… ဥပမာပြောရရင်…. Congratulation! လို့ပြောတာကို သူပြောနိုင်တယ်ဆိုပါတော့ ဒါပေမဲ့ စာလုံးမပေါင်းတတ်ဘူး… (နောက်မှသိခဲ့ရတာက ………သူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ရုရှားအသိုင်းအ၀န်းမှာလုပ်ရတာ….ဆိုတော့ အသံကြားပါများလာတော့ ပြောတတ်လာပေမဲ့ အရေးပိုင်းကမလိုက်နိုင်တော့ဘူး။ … မြန်မာတွေအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ပြီး မရေးနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်)
ဒီအတွက်ကြောင့် စကားပြောဖို့အတွက် ဦးစားပေးသလို…..ပြောသမျှစကားကိုလည်း ရေးတတ်အောင် လုပ်တတ်ဖို့ အတွက်လည်း သေချာ လေ့လာမှတ်သားစေချင်ပါတယ်…
Do not study grammar ပါတဲ့။ ဒီလိုပြောလို့ အံအားသင့်သွားနိုင်သလား။ သဒ္ဒါတတ် မှ စာတတ်မယ်။ သဒ္ဒါမတတ်ရင် စာမတတ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကလည်းရှိတာကိုး။ စာမေးပွဲအောင်ချင်ရင် (သို့) အမှတ်ကောင်းချင်ရင်၊ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားကောင်းချင်ရင် သဒ္ဒါ( Grammer) ကိုလေ့လာပါ။
အဲ့………..ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်ချင်ရင် သဒ္ဒါကိုအလေးပေး တာထက် အသုံးအနှုန်းကို ပိုပြီးလေ့လာသင့်ပါတယ်။ အပြောအင်္ဂလိပ်စကားမှာ သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းတွေ တွေးပြီး ၀ါကျဖွဲ့ပြောနေရင် ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြူးဖြူးပြောနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး နှေးကွေးသွားလိမ့်မယ့်။ မိမိပြောမဲ့စကားမှာ အဟန့်အတားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ မှားမှားမှန်မှန် ပြောရဲတဲ့သတ္တိကိုမွေးပါ။ ဒါဟာ ပထမလိုအပ်ချက်ပါ။
အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတဲ့ ဒေသခံအင်္ဂလိပ်အစစ်လူမျိုးအစစ်တွေတောင်မှ သူတို့ပြောတဲ့ အပြောအင်္ဂလိပ်စကား မှာ အမှားတွေ ပါတတ်ကြတာပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအစစ်တွေဟာ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါကို ပြည်ပက နိုင်ငံခြားသား တွေလောက် မသိကြဘူး။ ပြည်ပက နိုင်ငံခြားသားတွေက သူတို့ထက်ပိုသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ လောက် စကားမပြောတတ်ကြဘူး။
ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေကော??? ။ စကားပြောရင် မြန်မာသဒ္ဒါကို ထည့်စဉ်းစားပြီး ပြောဖူးလားလို့ တွေးမိဘူးလားမသိဘူး။။ ဘယ်ဟာက ကြိယာ၊ နာမ၀ိသေသန၊ ကြိယာဝိသေသန ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဲ့ဒီ ဥပမာကိုကြည့်ရင် ဆိုလိုတဲ့အချက်ကိုသဘောပေါက်လောက်ပါပြီ
Learn and study phrases ပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကို တစ်လုံးချင်းကျက်တာထက် စကားလုံးအတွဲလိုက်၊ စကားစုအလိုက် ကျက်မှတ်လေ့လာတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ။ စကားလုံးအတွဲလိုက်၊ စကားစုလိုက် ကျက်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင် သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘဲ သူ့ဘာသာသူ အလိုအလျောက် ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Permalink Reply by minnyanthar on December 29, 2011 at 21:42
Permalink Reply by moe way on December 29, 2011 at 23:07
Permalink Reply by thitsarphyu on December 30, 2011 at 12:40
Permalink Reply by Ei Ei Khaing Myat Thu on December 30, 2011 at 15:53
Permalink Reply by coe coe on December 30, 2011 at 16:14
Many thanks for your post .......................:)
Permalink Reply by AungMin on December 30, 2011 at 16:31
Thanks so much for your sharing... Let me share again on my facebook :)
Permalink Reply by 2jfy7vg3jkexw on December 30, 2011 at 16:34
A0945.tif, 69 KB
Permalink Reply by 000lxvbrj9cel on December 30, 2011 at 17:07
Permalink Reply by 2omgznq01ax1x on December 30, 2011 at 17:10
Permalink Reply by thandarnge on December 30, 2011 at 17:14
Permalink Reply by hein htet aung on December 30, 2011 at 17:24
အရမ်းကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးဖို့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဖြန့်ဝေဖို့ကူးသွားပါတယ် ခါင့်ပြုပါ။
Permalink Reply by win win myint on January 4, 2012 at 19:06